Wadaad dalka Pakistaan ka bilaabay mudaharaad isbedal doon ah [Sawiro] - Horseed Media
Wadaad dalka Pakistaan ka bilaabay mudaharaad isbedal doon ah [Sawiro] January 14, 2013 Share this:FacebookTwitterGoogle
Wadaad u dhashay dalka Pakistaan balse dhawaan dib uga soo noqday dalka Canada ayaa ka bilaabay wadanka Pakistaan mudaharaad socod dheer lagu marayo dalkaasi laguna codsanayo in wax laga bedalo sharciga iyo qaabka Doorashooyinka dalkaasi. Wadaadkan iyo taageerayaashiisa oo ku dhaw 8 kun ayaa socodkooda kasoo bilaabay magaalada Lahore ee bariga dalkaasi Pakistaan asagoo socod ku tagi doonaa magaalada caasimada ah ee Islamabad.
Wadaadkan oo lagu magacaabo Tahirul Qadri ayaa sheegay inuu doonayo inuu isbedal nabad ama kacdoon nabad ah uu ka bilaabo dalkaasi Pakistaan. Wadaadkan ayaa bishii December dib uga soo noqday dalka Canada oo uu muddo ku noolaa. Wadaadkan ayaa wuxuu hogaamiyaa dhaq dhaqaaq la baxay Mihaj-Al-Qur’aan.
Tahirul Qadri ayaa qorshihiisa yahay in mudaharaadkiisa ay ka qeyb qaataan dad gaaraya 1 milyan oo qof isla markaana lagu cadaadiyo dowlada Pakistan inay isbedalo rasmi ah ka sameyso dhanka doorashooyinka iyo waliba maamulka.
Hogaamiyahan ayaa ku eedeeyey dowlada Pakistaan mid musuaq maasuq ah isla markaana isbedal deg deg ah lagu sameeyo sharciyada Doorashooyinka kahor doorashada Baarlamaanka oo lagu wado inay dhacdo bisha May. Baarlamaanka dalkaasi Pakistan ayaa la kali diri doonaa bisha Maarso.
Wadaadkan ayaa sidoo kale soo jeediyey in Xukuumad kumeel gaar ah la dhiso taasina ay soo diyaariso Doorashooyinka lagu wado inay dhacdo bartamaha bisha MAY, wuxuuna sheegay in xukuumada kumeelgaarka ah dhismaheeda ay ka wada tashadaan Xisbiyada, Garsoorka iyo Militariga.
Dowlada Pakistaan ayaa sheegtay inaysan ka hor joogsan doonin Wadaadkan Mudaharaadkiisa, waxayna xukuumada heegan gelisay ciidamo gaaraya 10 kun oo askari oo la dhigay wadada ay marayaan dadka mudaharaadaya iyo goobaha laga soo galo magaalada caasimada ah ee Islamabad.
Dowlada Pakistaan ayaa sheegtay inay dooneyso inay sugto amaanka dadka banaanbaxa dhigaya, iyadoo sheegtay inay ka cabsi qabto in Talibanka ka faa’ iideystaan banaanbaxa oo ay weerar ku qaadaan dadka banaanbaxaya, dowlada ayaa sheegtay inay sidoo kale illaalo khaas ah siin doonto Wadaadkaasi soo abaabulay mudaharaadka looga soo horjeedo xukuumada.